PowerDVD bụ a eluigwe na ala mgbasa ozi ọkpụkpọ maka gị niile ntụrụndụ mkpa mmasị ọdịyo na vidiyo faịlụ gbakwunyere ya nwere ike ike na Facebook na YouTube videos. Ọ nwere nnọọ ọrụ enyi na enyi interface maka ya ọrụ. Ọ nwere ike na-egwu ọ bụla nkiri, video ma ọ bụ music faịlụ ma ọ bụ ele foto site ọ bụla DVD ma ọ bụ site na mpaghara disk draịva. Ọ na-enye nke kacha mma mma ụda na videos maka nkiri ma ọ bụ na-ege ntị. Dị ka PowerDVD e nwere ndị ọzọ software dị ka ọma nke ike-eji dị ka ihe uzo ozo ka PowerDVD.
Ya mere, ebe bụ ụfọdụ n'ime Top 10 Best Alternatives ka PowerDVD:
RealPlayer nwere ọtụtụ ọhụrụ atụmatụ maka videos na music faịlụ. Ọ ghọọ nnọọ ọrụ enyi na enyi. Nke a na usoro nwere ọrụ nke video-trimming ma nakwa mgbanwe na ike igwu egwu ma na download video si Facebook na YouTube. Ọ nwekwara ike na-agba ọsọ multi-format videos na music na kwa eji dị ka a DVD ọkpụkpọ.
WinDVD nwere ike igwu 2D na 3D videos na ọ nwekwara ike igwu High Definition videos enweghị ihe ọ bụla lag. Ọ na-ekere HD na Blu-ray videos enweghị ihe ọ bụla lag na ọ na-arụ Multi-format videos. The ọhụrụ nsụgharị nwekwara otu ọrụ ma ọ bụ ngwá ọrụ nke 2D ka 3D akakabarede. Ọ nwekwara ike igwu DVD faịlụ dị ka mma. Ọ bụkwa ihe ọma ọzọ maka PowerDVD.
SMplayer nwere ike igwu nnọọ ọtụtụ ndị na-eji na mkpa formatted ọdịyo na video faịlụ. Ọ na-ekere faịlụ na-enweghị mkpa nke ọ bụla codecs externally. Ọ nwekwara ike igwu DVD faịlụ nnọọ were were. Otu nke ịtụnanya ngwá ọrụ ma ọ bụ i nwere ike ikwu a ọrụ nke SMplayer bụ na, ọ na-echeta gị ntọala, dịka ị ịtọ gị equalizer ka a ụfọdụ larịị ọ ga-echeta na. Ọzọkwa, dị ka ị na-ekiri fim na ị hapụrụ a nkiri ka otu isi ihe, na mgbe ị na-amalite nkiri ahụ ọzọ ọ ga-amalite site n'otu isi ebe ị hapụrụ ikpeazụ.
Mbugharị Player bụkwa a dị nnọọ mma ma dị ike media ọkpụkpọ. Ọ nwekwara ike igwu ọ bụla usoro nke video faịlụ na audio faịlụ. Ọ na-eji dị ka a DVD ọkpụkpọ na nwere nza atụmatụ dị ka equalizer, faịlụ nchọgharị, agba akara, na nza nke ọzọ na-akpali akpali na smart atụmatụ. Mbugharị ọkpụkpọ bụ otu n'ime ezi ọzọ ka PowerDVD.
DA Player bụ ike free ọdịyo na video ọkpụkpọ. Ọ nwere 400 gbakwunyere ọdịyo na video codec ugbua arụnyere n'ime ya. Ọ nwere ike na-egwu dị iche iche nke ọdịyo na video formats. Ọzọkwa, o nwere ọtụtụ atụmatụ maka video faịlụ na ọdịyo faịlụ dị ka audio equalizer, wdg O nwere ike igwu DVD na High Definition video faịlụ dị ka mma.
VLC bụ ihe dị mfe na-emeghe-isi iyi ọdịyo na video ọkpụkpọ. Nke a software bụ obere na mfe iji. Ọzọkwa ọ pụrụ ịkwado multiple ọdịyo na video formats. Ọ nwere ike igwu DVD na High definition faịlụ mfe. Ọ na-nwere a menu maka ọdịyo na video njikwa nke e dere nza nke atụmatụ. Ọ ga-eji na-dị ka a nkesa.
KMPlayer bụ otu nke kasị mma ọdịyo na video ọkpụkpọ. Ọ nwekwara ike igwu DVD na HD video gbakwunyere ya nwekwara ike igwu 3D animated videos. O nwere ọtụtụ atụmatụ maka ọdịyo na video akara. Na ọnọdụ, ị pụrụ ịchịkwa ìhè, iche na saturation maka videos na ọdịyo faịlụ ị pụrụ ịnụ ụtọ audio equalizer. Ọ nwekwara ike igwu multiple ọdịyo na video formatted faịlụ, nke dị mkpa formats. O nwekwara iyo mma ka nke ọma, na ọtụtụ ndị ọzọ na-akpali akpali atụmatụ. Ọ bụ ihe kasị mma ọzọ ka PowerDVD. Ihe kasị mma na nke a ọkpụkpọ bụ kpọmkwem keyboard na òké na-achịkwa a ebre video. Onye ọ bụla na-achịkwa e nyere mgbe ị na-emeghe elu menu na nri click.
Bs Player bụ nnọọ mfe iji software. Ọ nwekwara ike ji dị ka onye ọzọ na-PowerDVD software. Dị ka ihe niile a DVD ọkpụkpọ ma ọ bụ mgbasa ozi ọkpụkpọ software. Bs Player bụkwa a multi-format ọkpụkpọ maka ọdịyo na video entertainments. Ọ nwere ike na-egwu nile nke mkpa na-ejikarị formats na ụwa. O nwekwara niile nke dị mkpa atụmatụ maka ọdịyo na video mgbasa ozi faịlụ. Ọ nwere onye ọhụrụ mma nke na-ewere screenshot nke ọ bụla video ugbu a ị na-egwuri egwu.
9. DVD X ọkpụkpọ:
Dị ka ndị ọzọ nile DVD Player, DVD X Player nwere nakwa niile nke atụmatụ maka ọdịyo na video media faịlụ gbakwunyere Ọ nwekwara ike multiple formatted ọdịyo na video faịlụ. Otu n'ime ọhụrụ atụmatụ na DVD X ọkpụkpọ bụ na ọ bụ Ụwa Nke 1 mgbasa ozi ọkpụkpọ nke bụ mpaghara free. Region free pụtara na ọ nwere ike igwu niile nke mpaghara-coded DVD faịlụ. / P>
10. SuperDVD ọkpụkpọ:
SuperDVD bụ otu n'ime ihe ndị kasị ìhè na ike na mfe DVD ọkpụkpọ software. E mere nanị maka DVD ebre, dị ka oge na-aga pụọ, ọ nwere ike ugbu a na-egwu nile nke mkpa na-ejikarị ọdịyo na video formatted faịlụ. Ọ nwere niile nke dị mkpa mma maka ọdịyo na video faịlụ. Dị ka DVD X Player, ọ bụkwa a mpaghara free media ọkpụkpọ. Ihe dị mkpa bụ na ọ na-nnọọ ngwa ngwa na nnọọ anabata software. Ọ bụkwa ndị kasị mma nnọchi ma ọ bụ ọzọ na-PowerDVD Software.
> Resource> DVD> Top 10 Best Free Alternatives ka PowerDVD